Kana mushure mokunge musarudza-mukati, iwe unoshandura pfungwa dzako, unogona kubvisa mvumo yako kwatiri kuti tibatane newe, nekuda kwekuunganidza, kushandiswa kana kubudiswa kwemashoko ako, chero nguva, ne kutaura nesu
Zvose zvinotsiviwa zvikwereti zvinoenderana nemitemo yakagadzirirwa nePCI-DSS sezvinotungamirirwa nePCI Security Standards Council, iyo inobatanidza mazita akaita seVisa, MasterCard, American Express uye Discover.
Kuti uwane mamwe mazano, ungadawo kuverenga Mitemo yeBasaify pano kana Privacy Statement pano.
Kunyanya, yeuka kuti vamwe vatapi vanogona kunge vari mukati kana kuti vane zvivako zvinowanikwa mune imwe nzvimbo dzakasiyana kupfuura iwe kana isu. Saka kana ukasarudza kupfuurira nekutengeserana kunosanganisira mabasa omumwe wevashandi vebasa, ipapo ruzivo rwako rungave rwuri pasi pemitemo yehurumende (s) iyo iyo mvumo yevashandi kana zvivako zvayo zviripo.
Kana iwe uchititumira nekodhi yako yekadhi yemarikiti, iyo inonyorwa inonyorwa uchishandiswa shato yakachengetedza teknolojia (SSL) uye akachengetwa neAES-256 kufungidzirwa. Kunyange zvazvo pasina nzira yekutsvaga paIndaneti kana kuvhara kwemagetsi ndeye 100% yakachengeteka, tinotevera zvose zvePCI-DSS zvinodiwa uye tinoshandisa zvimwe zvinowanzogamuchirwa nemabhizimisi.
Heino urongwa hwekiki dzatinoshandisa. Takanyora apa pano kuitira kuti iwe usarudze kana uchida kusarudza ma-cookies kana kwete.
CHIKAMU 7 - MAKORE OKUITA
CHIKAMU 8 - KUSINZWA KWENYAYA YAKASIMBA YAKO
Kana iwe uchida: kuwanika, kururamisa, kuchinja kana kubvisa chero ruzivo rwomunhu pachedu tinewe pamusoro pako, nyora kunyunyuta, kana uchitsvaga ruzivo rukuru tibatane nesu